Home Decor | Great Arakan
Home DIY Home Decor
ကျော်ဝင်း ခိုင် - June 29, 2018
ကျော်ဝင်း ခိုင် - June 25, 2018
Home Decor ကျော်ဝင်း ခိုင် - December 3, 2017 0
ပလက်စတိတ်ခွက် တခွက်ထဲမှာ ရပူ လဖက်ရည်ခွက် ၂ ခွက်ဇာလောက် လောင်းထည့်ဗျာလ်၊ ဆား ၂ ဇွန်းလောက် ရောထည့်လိုက်ပါ။ သမလားအောင် ဇွန်းနန့် တစိချေ မွီပလိုက်ပါ။ ပေနိန်ရေ အိုးသုတ်ဖတ်ကို ယင်းအရည်ထဲမှာ ထည့်ပနာ တညဉ့်လောက် သိပ်ထားလိုက်ပါ။ နောက်နိန့် ယင်းအရည်နန့် ဆီးပလိုက်စွာနန့်...
ရီနန့် ဗနီကာရည်ကို ဆတူရောပနာ ယင်းအရည်ထဲမှာ ဆီးချင်ရေ ကြွီခွက်တိကို စိမ်ထားလိုက်ပါ။ ကြီးကေ ယင်းအရည်နန့် အလှပ စွတ်အောင်ထိ လောင်းထားလိုက်ပါ။ တနာရီလောက်ကြာရေခါ အိုးသုတ်ဖတ်ကို ယင်းအရည်ထဲမှာ စိမ်ဗျာလ်၊ ကြွီခွက်ကို တစိချေ ဖိပနာ တိုက်ပလိုက်ပါ။ ကြွီခွက်က အစွန်းအထင်းတိ ပျောက်လားပါလိမ့်မေ။
ရီထဲမှာ ဗနီကာရည် တစိချေ ရောပနာ၊ ဖန်ခွက်ကို ယင်းအရည်ထဲမှာ တနားချေ စိမ်ထားလိုက်ပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာကေ ဆားကို ခွက်သုတ်တေ အဟတ်ထဲမှာ ဖြူးထည့်ပနာ၊ ဖန်ခွက်ကို ယင်းဆားနန့် တစိချေ ဖိပနာ ပွတ်တိုက်ပလိုက်ပါ။ ဗြီးကေ ခွက်ကို ရီနန့် စင်အောင် ဆီးပနာ...
အိုးထဲမှာ ဂျီးကပ်နိန်စွာကို ဇာပိုင် ချွတ်ဖို့လဲ?
အိုးထဲမှာ ရီတစိချေ ထည့်ဗျာလ်၊ ဗနီကာရည် တခွက် လောင်းထည့်လိုက်ပါ။ အဗြီးကေ အရည်တိ ရောလားအောင် အိုးကို မ,ပနာ အသာချေ ဘယ်ညာ လှုပ်ပီးဗျာလ်၊ မီးခွင်ထက်မှာ တင်ပနာ အပူပီးလိုက်ပါ။ ဘူစီပေါင်းချေတိ တက်ပနာ ဆူလာဗျာလ်ဆိုကေ၊ အိုးကို မီးခွင်ထက်က ချဗျာလ်၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါမှုန့်တိ...
ပုံမှန် စွန်းတတ်တေ အစွန်းတိ ချွတ်နည်း အမျိုးမျိုး
Home Decor ကျော်ဝင်း ခိုင် - December 2, 2017 0
Home Decor ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 29, 2017 0
ခေတ်မီရေ အိမ်ရှိခန်း ပုံစံတိ၊ ရခိုင်သားတိ လိုချင်ကေ မရနိုင်ဆိုစွာ မရှိ
Home Decor ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 24, 2017 0
"ဆဆင်းရရဲ မွီးလာစွာ ငါရို့ အပြစ် မဟုတ်ကေလည်း၊ ဆဆင်းရရဲ သီလားရစွာ ငါရို့ အပြစ်။" ဘဲလ် ဂိတ် "လူ့ဘဝမှာ ရခိုင်သားတိ လိုချင်ကေ မရနိုင်ဆိုစွာ မရှိ။ ရခိုင်သားတိစွာ ဇာလူမျိုးထက်လည်း မညံ့။" ကျော်ဝင်းခိုင် ...
ပလင်းကို ဇာပိုင် ဖြတ်ဖို့လဲ?
Home Decor ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 20, 2017 0
အယင်ရက်တိက သုံးဗြီးသား ပလင်းတိကို ဖန်ခွက်၊ မီးခွက်၊ မီးဆိုင်း အစရှိပနာ ဥာဏ်ရှိကေ ရှိသလောက် အပျော်တမ်းကနိန် စီးပွားဖြစ်တိ လုပ်နိုင်ရေဆိုစွာ တင်ပြလားဗြီး ဖြစ်ပါရေ။ အလွယ်ဆုံး ပလင်းဖြတ်နည်း တနည်းကိုလည်း ပြထားပါရေ။ အေတခါ ပလင်းဖြတ်နည်း နောက်တနည်းကို တင်ပြပီးပါမေ။ လိုစွာတိ - ၁) ပုံမှာ...
Home Decor ကျော်ဝင်း ခိုင် - November 19, 2017 0